कसरी स्वादिष्ट माछा भुट्नु? सुझाव र चाल
जानिन्छ, माछा एक हप्ताको कम्तिमा दुई वा तीन पटक लागि आहार समावेश हुनुपर्छ। यसलाई तपाईंले फरक व्यञ्जन धेरै पकाउन गर्न सक्नुहुन्छ। जेली र - सबैभन्दा चिसो नाश्ता को लोकप्रिय मसालेदार माछा। एक क्लासिक पहिलो पकवान, को पाठ्यक्रम, खुशबूदार कान छ। दोस्रो एक किसिम र कुनै भन्नुहोस्। तिनीहरूलाई को सरल - तला माछा। तर सबै साईट Mistress गुलाबी स्लाइस खाना पकाउने सबै नियम थाहा छैन। यस लेखमा हामी कसरी स्वादिष्ट माछा भुट्नु कुरा हुनेछ। सायद उपयोगी सुझावहरू उपयोगी र अनुभवी सारा महाराज, "माछा" अवस्थामा बारेमा धेरै थाहा।
कसरी स्वादिष्ट माछा भुट्नु को मुख्य रहस्य
माछा खरीद गर्दा ताजगी ध्यान - सफल पकाउने गर्न प्रमुख छ। समुद्री सामान्यतया स्थिर बेचे। तर, स्वादिष्ट तलना कसरी को नियम दिइएको नदी माछा, प्रत्यक्ष नमूनों लागि राम्रो अप्ट।
सफाई र gutting
समुद्री माछा gutted बेचिएको र साफ गर्दै छन्, यो केवल ठूलो पंख हटाउन र पेट भित्र राम्रो कुल्ला गर्नुपर्छ। नदी माथि अझै पनि कठिन काम गर्न छ। सजिलो तराजू सफा गर्न बनाउनको लागि, माछा नुन संग RUB गर्नुपर्छ। , को intestines हटाउने गर्दा त्यहाँ gallbladder (यो मामला मा तुरुन्तै rancidity जोगिन गर्न मज्जा कुल्ला) बिगार्न एक जोखिम छ रूपमा विशेष गरी सावधान रहनुहोस्। माछा को टाउको देखि यो नाले हटाउन आवश्यक छ।
को टुक्रा को मोटाइ कस्तो हुनुपर्छ?
एक उत्पादन आकार आधारमा कसरी स्वादिष्ट माछा भुट्नु को रहस्य, को। सानो नदी र समुद्र को केही प्रजातिहरू (जस्तै, capelin) राम्रो पुरा, overcook होसियार हुनुको तयार। ठूलो माछा पहिले आवश्यक टुक्रा मा कटौती। भाग भागहरु मोटाइ मा लगभग तीन सेन्टिमिटर हुनुपर्छ। जब frying (गहिरो कराइ लेदो मा ओवन वा स्ट्यु मा पाक्नु) पूरा गर्नुपर्छ थप उपचार पछि ठूलो आकार।
यो prisolit (को पकाउने सुरु गर्नु अघि एक घण्टा र एक आधा) अग्रिम छ भने कुनै पनि तला माछा राम्रो स्वाद हुनेछ। प्रति उत्पादन को किलोग्राम चमचा नुन बारे, र चिसो पानी nyzhno माछा कुल्ला सुरु र तरल खर्च नगरेर लागि colander मा खारेज अघि आवश्यक छ। , मरिच - पूर्व-marinating पनि स्वाद अत्तरहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ माछा, को लागि मसला सुकेको जडीबुटी, र अन्य।
के राम्रो प्रयोग - कुटपिट वा पीठो?
कसरी स्वादिष्ट माछा भुट्नु निर्णय गर्दा, तपाईं हो, को पाठ्यक्रम, को breading विधि विचार। कुटपिट क्रिस्प, सुकेको रोटी वा पीठो को पाउडर: निम्न एउटा प्रयोग। पहिलो विधि सबैभन्दा रसदार boneless को सानो टुक्रा खाना पकाउने लागि उपयुक्त छ। दोस्रो - एक थप परम्परागत र माछा को सबै प्रकार को लागि विश्वव्यापी मानिन्छ। पीठो मा कुटपिट अन्डा मा पहिलो र त्यसपछि प्रारम्भिक enveloping टुक्रा - धेरै व्यञ्जनहरु मा कुटपिट को एक रोचक व्याख्या फेला परेन।
कसरी स्वादिष्ट रातो माछा भुट्नु?
ओवन वा ग्रिल मा Bake यो अवस्थामा विकल्प रोक्नुहोस्। फलस्वरूप, तिमी महान स्वाद संग एक छुट्टी भोजन प्राप्त। तपाईं एक हार्दिक भोजन र मात्रा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ? ओभरले माछा, आलु स्लाइस र माथि छर्कनु पनीर को रूप मा राखे। सुन्दर पूरा भोजन तयार छ! खानपान!
कसरी फोडा गर्न चामल - विस्तृत निर्देशन
पकाउने मा Rosemary
धनी तातार भोजन - को उम्दा लागि साँचो भोज
कसरी morels तयार गर्ने धेरै सिफारिसहरू
घर मा नुन ट्राउट, साथै अर्को रातो माछा procure रूपमा
तारेको Lagman: नुस्खा
पत्नीलाई कसरी फर्काउने: उपयोगी सल्लाह
बेरवाट मशरूम संग - एक बहुमुखी डिश
फेसबुक आफ्नो खुशी को बाटो मा हुन्छ रूपमा
Andrologist: कसले के गरिरहेको छ?
अल्फ्रेड Schnittke, "Revizskaya परी कथा।" को Taganka थिएटर "Revizskaya कथा" को प्रदर्शन
मनपर्ने मिठाई: घर मा "Tiramisu" पकाउन कसरी
नेटवर्कमा लोकप्रिय के हो? रोचक पृष्ठ "VKontakte"
दर्ता बिना सैनिक Payslip। रूसी संघ को व्यक्तिगत खाता serviceman
तुलसी 1: सरकार, विशेष गरी राजनीति, आफ्नो पत्नी र छोराछोरीको वर्ष
कसरी सामूहिक मात्रा बिना घरमा tarts Bake गर्न?
एक लोरी के हो? यो एक जीवनकालमा को नकारात्मक बच्चा को संरक्षण र संरक्षकको छ